China TD-Q-100 Single Electric Electric Pendant Endoscopic Pendant ho an'ny mpamokatra teatra Operation sy mpamatsy | Wanyu
1. Rafitra mandeha amin'ny herinaratra
Miaraka amin'ny rafitra mandeha amin'ny herinaratra, mety kokoa sy haingana kokoa ny fandidiana.
2. Aratra voarindra
Ny vatan'ny tanana voarindra dia mamela ny pendantan'ny fandidiana hitondra lanjany bebe kokoa ary hametraka fitaovana bebe kokoa.
Pendant fandidiana elektrika
Araka ny fenitra iraisam-pirenena henjana, ny faritra misy ny entona sy ny herinaratra dia noforonina manokana, miantoka ny fikajiana herinaratra sy ny fantsom-pamokarana rivotra tsy hivily na hianjera tampoka noho ny fihodinan'ny pendant.
Ny fitoeran-java-maneno dia vita amin'ny mombamomba ny alimo alim-pito mahery, tanjaka tsara. Misy lalamby vy tsy misy fangarony amin'ny andaniny roa amin'ny fametrahana fitaovana hafa. Ny haavon'ny tray dia azo ahitsy arak'izay takiana. Ny fitoeram-pako dia misy zoro boribory miaro
Ny halavan'ny sandry: 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm
Taratra miasa mahomby: 480mm, 580mm, 780mm, 980mm
Pendant endoscopic medika elektrika tokana
Previous: TD-D-100 Pendant Gas fandidiana elektrika tokana misy mari-pahaizana CE
Manaraka: TD-100 pendant valiha mekanika tokana-tanana ho an'ny hopitaly
TS-DQ-100 Endosco fitsaboana herinaratra roa ...